Ungagxibha kanjani phansi - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ungagxibha kanjani phansi
Hlela: UDenny　2020-01-16　Iselula
1. Okokuqala sisebenzisa isigaxa somswakama ukuhlanza phansi ukususa uthuli kanye nokungcola. Ngemuva kokuthi ingaphezulu lamapulangwe lisomile, fafaza ngobumnene i-wax emhlabathini cishe ngesikwele esisodwa. Qikelela ukuthi ungafafazi kakhulu. Sebenzisa i-wax. Akuvamile ukuthi kusebenze kahle.
2. Sebenzisa i-mop encane ukudonsela lapho i-wax engamanzi ifafazwa khona kaninginingi, ukuze ungqimba lwe-wax luboshelwe ngokulinganayo phansi kokhuni, noma ngabe yini ayigelezi. Bese uqhubekela esinyathelweni esedlule, uqhubeke ufafaze i-wax wax, bese ugcoba ngokulinganayo nge-mop. Kuze kufinyelele phansi wonke umhlaba bese kuhudulwa futhi.
3. Ngokulandelayo, ake i-wax engamanzi ihlale esitezi sokhuni amahora ambalwa ukwenza i-wax engamanzi isatshalaliswe ngokulinganayo phezu kwephahla lwokhuni.
4. Ngegabha, usule emuva naphambili eplazini lamapulangwe amahlandla ambalwa, futhi uzobona ukuthi ingaphezulu lelezi zokhuni alisenamafutha, kepha libonisa ukukhanya okufana nesibuko. Uma ubheka indawo yokhuni ebangeni kusuka kude Kusetshenziswa ungqimba we glaze, omuhle kakhulu. Ungayithinta ngezandla zakho ngaphandle kokuzizwa unamafutha.
5. Bheka futhi ngamunye ngamunye ukubona ukuthi ikhona yini indawo ethambile, bese ulungisa, ukuze kugcwaliswe i-waxing yokhuni.
Indima yokuklanywa phansi:
Susa amabala anenkani phansi, wehlukanise indwangu emoyeni ngokufaka i-wax, unciphise ukulimala kwezinto ezibonakalayo ngenxa ye-oxidation noma ukuxhumana nezinto eziyingozi emoyeni, futhi uzuze inhloso yokwelula impilo yezinto ezibonakalayo nobuhle. Okubaluleke kakhulu ukuthi isibuko esigqamile esibunjiwe sihlala isikhathi eside, esingavimbela ukubambeka, ukuklwebheka, ukushelela, ukuqubuka kwesithende kanye nokunye ukulimala. Ngaso leso sikhathi, ngemuva kokupholisha, indawo ye-wax iba nzima futhi ibe nzima.
Ungagxibha kanjani phansi Okuqukethwe okuhlobene